14 Milyan oo Rakaab ah ayaa Diyaaradda isticmaalay bishii Janaayo | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 Ankara14 milyan oo rakaab ah ayaa adeegsaday Diyaaradda bishii Janaayo
10 / 02 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, Garoomada, WADADA, Headline, TURKEY
milyan rakaab ah ayaa adeegsaday diyaarad bishii Janaayo
Agaasinka Guud ee Maamulka Duulista Hawada Gobolka ayaa ku dhawaaqay tirakoobka diyaaradaha, rakaabka, iyo tirakoobka xamuulka bisha Janaayo 2020.
Sida waafaqsan, bishii Janaayo ee 2020;
Tirada diyaaradaha soo dego ama qaadaya garoonka diyaaradaha; waxay ahayd 67.158 khadadka gudaha iyo 43.473 oo khadadka caalamiga ah. Wadarta gaadiidka duulimaadyada ee loo adeegay waxay gaareen 145.072 oo leh xad dhaaf.
Bishan, Turkey u adeega gaadiidka rakaabka guriga garoomada diyaaradaha ee guud ahaan 7.799.042, gaadiidka rakaabka caalamiga ahaa 6.131.774. Sidaa daraadeed, wadarta guud ee rakaabka leh rakaabka safarka tooska ah ayaa la xaqiijiyey inuu yahay 13.952.310 bishii la sheegay.
Gawaarida xamuulka (xamuulka, boosta iyo shandadaha) taraafikada; Bishii Janaayo, waxay gaartey wadar ahaan 63.247 tan, 211.696 tan gudaha iyo 274.943 tan oo caalami ah.
35.089 Qorshayaal, 5.276.260 KA-BILAASH KU SAABSAN AIRPORT AIRPORT EE JANUARY
Gawaarida diyaaradaha ee soo dagay oo ka soo degay gegada diyaaradaha ee Istanbul bishii Janaayo waxay ahayd 8.370 duullimaadyada gudaha ah iyo 26.719 duulimaadyada caalamiga ah, oo iskucelcelis ahaan ahaa 35.089.
Gaadiidka rakaabka wuxuu ahaa 1.263.808 duulimaadyada gudaha iyo 4.012.452 ee duulimaadyada caalamiga ah.
Rakaabka 111 iyo Madaarka Caalamiga ah ee Istaatistik
5 In ka badan hal malyan oo rakaab ah ayaa istimaalay garoonka diyaaradaha ee Istanbul bishii Maajo
1 Milyan Qof ayaa Isticmaala Gawaarida Telefoon ee Ordu
1 million 748 kun 835 waxay adeegsadeen Samsun Batipark Cable Line
118 million dadka waxay isticmaaleen Marmaray
250 Milyan Qof ayaa isticmaalay Marmaray